Iindaba -Shanghai Meokon i-2 "Meokon Smart Sensor" Umsitho weBhaso leScholarship ogqitywe ngokugqibeleleyo
UShanghai Meokon umsitho we-2 “Meokon Smart Sensor” weShere Award Award ugqitywe ngokugqibeleleyo
Nge-11 kaNovemba ka-2020, inkqubo yonyaka ye- "Meokon Smart Sensor Scholarship" yabanjwa kwakhona.
Le nkqubo yaqaliswa yi-MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD kwaye le nkqubo ikhuthaza iiyunivesithi kwiitalente ze-smart sensor. Lo msitho wokunikezelwa kwamabhaso wabanjwa e-Changshu Institute of Technology njengomsitho wesibini we "Meokon Smart sensor Scholarship". UDelong, u-Chen ongumphathi jikelele weShanghai Meokon, wazimasa lo msitho kwaye wenza intetho yokuphakamisa ikhethini.
Intetho nguMphathi Jikelele
Shumayela nguMlawuli Jikelele
Okulandelayo, iinkokheli zaseShanghai Meokon zibambe umsitho wokuwonga ngeetalente zaseyunivesithi ezifumene isifundi kwaye zanikezela isatifikethi sebhaso; I-Shanghai Meokon iyayixabisa yonke italente kwaye ivula iingalo zayo ukwamkela yonke italente enephupha kwaye izabalazela ubomi bayo.
Eli lixesha lesibini lilandelelana lokuba iShanghai Meokon ikhuphe izibonelelo zokufunda kwiiyunivesithi zabafundi ababalaseleyo abanobuchule bokubona. Injongo yokukhutshwa kwemali yokufunda, kwelinye icala, ukukhuthaza abafundi abagqwesileyo ukuba bafunde nzima kwaye babe ziintsika zokwenza izinto ezintsha kunye nophuhliso lweshishini lenzwa ngokukhawuleza. Kwelinye icala, ikwaxhasa kwaye ikhuthaze ukukhula kweetalente kwiiyunivesithi. Ukongeza, inkampani inethemba lokuba ngokusebenzisana kwamashishini esikolo, inokufumana iitalente ezikumgangatho ophezulu ukuze ityebise ukukhula kwayo. Kwixesha elizayo, izifundiswa ziya kusekwa kwiiyunivesithi ezininzi ukukhuthaza iitalente ezingakumbi.